Faafin – Somalia
Category Archives: Faafin
TENDER:Rehabilitation and renovation contractor required
FaafinBy Admin February 19, 2020 Leave a comment
Faafin, WarsaxaafadeedBy Admin February 14, 2019 Leave a comment
Safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Kenya Danjire Maxamuud Axmed Nuur (Tarsan) ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay baahi wayn u qabto in laga qaado xayiraadda hubka ee saaran si ay uga adkaato kooxaha argagixisada ah ee dhibaatada ka wada Soomaaliya iyo gobolka bariga Afrika. Wareysi uu siiyay Wargeysta Bariga Afrika ee ka soo baxa dalka…
Soomaalida ku nool Kenya oo u dabaal degtay kowda Luuliyo
FaafinBy Admin May 25, 2018 Leave a comment
Soomaalida ku nool dalka Kenya ayaa u dabaal degtay munaasabadda kowda Luuliyo oo ku beegan maalinta xornimada gobollada Koofureed, Midowga Woqooyi iyo Koonfur iyo curashadii Jamhuuriyadda Soomaaliya. Madaxweynihii hore ee Soomaliya mudane Shariif Sh Axmed iyo masuuliyiinta safaaradda Soomaaliya ee Kenya ayaa ka qeyb galay munaasabadda.
Madaxweynaha Soomaaliya oo la kulmay dhiggiisa dalka Kenya
Madaxweynaha Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed ayaa xarunta madaxtooyada ee Nairobi kula kulmay dhiggiisa waddanka Kenya mudane Uhuru Kenyatta. Labada madaxweyne ayaa ka wada hadlay xiriirka labada dalka, iskaashiga dhaqaale iyo waliba xaaladda xuduudda u dhaxeysa labada waddan. Madaxweyne Farmaajo waxaa safarka ku wehliya wasiiro ka tirsan xukuumadda, kuwaas oo kulamo la yeeshay masuuliyiin ka…